Woyanaha oo maamulka Somaliland ku amray inay xoojiyaan ciidankooda Bada. | ogaden24
Woyanaha oo maamulka Somaliland ku amray inay xoojiyaan ciidankooda Bada.
Wararka magaalada Hargaysa ka imaanaya ayaa sheegaya dalab gumaysiga Ethiopia kayimid oo ah in maamulka Somaliland ay si aad ah u xoojiyaan ciidanka badda isla markaasna la kordhiyo ciidanka ialalada xeebta Saylca oo si gaar ah farta loogu fiiqay, dad xog ogaal ah oo Qorahay Media u warama ayaa sheegay in gumaysiga Ethiopia ay la soo daristay cabsi xoogan oo uu ka qabo dhinaca dawlada Masar.
Ma cadda sababta xiligan keentay in gumaysiga Ethiopia uu maamulka Somaliland arrintan ka dalbado islamarkaasna xeebta Saylac uu si agar ah farta ugu fiiqo waxaase la sheegaya in uu jiro tuhun uu gumaysigu ka qabo in xeebaha Somaliya guud ahaan ay khatar dhanka Masara ah kaga iman karto, dhinaca kale dawlada Masar ayaa horay u sheegtay in ay caawin doonto shucuubta gumaysiiga Ethiopia ku hoos dulman waxayna arrintaasi walwal xoogan ku abuurtay gumaysiga sii dhacaya oo xalad adag wajahay.
Jawaabta uu maamulka Somalilnad arrintan ka bixiyay lama shaacinin balse waxaa la xaqiijinayaa in dalbkaasi uu yahay mid gumaysiga si dhab ah uga soo go’ay si degdeg ah in loo fululiyana mamaulka Somaliland lagu adkeeyay, gumaysiga gabalkiisii dhacay ayaa dhawrkii sano ee u dambeeyay xeebaha Somaliya ay balaayo uag shanqadhaysay waxyna marar badan sheegeen in ay ciidamo ka soo dageen arrintaas oo lagu macneeyay in ay ka mid tahay uun cabsida & kalsooni darada gumaysiga haysata